Ciidammada Abiy Ahmed Oo Magaalo Kale Oo Muhiim Ah Ka Qabsaday Tigray-ga | Hangool News
Ciidammada Abiy Ahmed Oo Magaalo Kale Oo Muhiim Ah Ka Qabsaday Tigray-ga
November 16, 2020 - Written by Hangool
Xukuumadda raysal wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa maanta sheegtay inay qabsatay magaalo kale oo ku taalla waqooyiga gobolka Tigray, kadib ku dhowaad laba toddobaad oo dagaal uu ka socday gobolkaasi.
War kasoo baxay dowladda federaalka ayaa lagu sheegay in ciidammada dowladdu ay magaalada Alamata ka xoreeyen kooxda Tigrayga, xili uu dhawaan sidan oo kale uu Abiy Axmed u shaaciyey magaalo ay sheegen inay ka qabsadeen TPLF.
Abiy Ahmed ayaa dhamaadka toddobaadkii hore sidan oo kale u sheegay in ciidammada dowladda ay qabsadeen galbeedka gobolka Tigray, iyaga oo ka adkaaday ciidammada deegaanka, oo uu ku eedeeyey xasuuq.
“Galbeedka gobolka Tigray waa la xoreeyey. Ciidamada dowladda waxay hadda kaalmo iyo adeeg bani’aadannimo siinayaan shacabka, wayna quudinayaan,” ayuu Abiy ku yidhi qoraal uu xiligaasi soo dhigay twitter-ka.
Inta badan ma jirto faah-faahin ay dowladda federaalka Itoobiya ka soo saarto guulaha ay ka sheegato dagaalka kala dhaxeeya maamulka maylka adag ee gobolka Tigrayga.
Hogaamiyaha kooxda TPLF, Debretsion Gebremichael ayaa ku booriyay Qaramada Midoobay iyo Midowga Afrika inay cambaareeyaan falalka ciidamada federalka Itoobiya, isagoo ku eedeeyay inay adeegsadeen hub casri ah oo ay ku jiraan diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee loo yaqaan Drones-ka, kuwaasi oo uu sheegay inay ku bur-buriyeen biyo-xidheen iyo warshad sokorta.
“Abiy Axmed wuxuu dagaalkan ku qaadayaa shacabka Tigrayga, isagana masuul ka ah ujeeda ujeedada laga leeyahay ee ah dhibaatada dadka ee shacabka iyo burburka mashaariicda waaweyn ee kaabayaasha dhaqaalaha” ayuu yidhi